Drostanolone Enanthate Powder DE Legal Masteron E Steroid သည် ကြွက်သားကြီးထွားမှုအတွက် CasNO.303-42-4
အလင်းတန်း-DE တရားဝင် Masteron Steroid၊ Drostanolone Enanthate
1. ထုတ်ကုန်အမည်- Drostanolone Enanthate(Dromostanolone Enanthate)
2. CAS နံပါတ်:၄၇၂-၆၁-၁၄၅
3. မော်လီကျူးဖော်မြူလာ- C27H34O3
4. စံ- လုပ်ငန်း စံ
5. ဆန်းစစ်ချက်- 99%
6. ပုံပန်းသဏ္ဍာန်- အဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲမှုန့်
7. စံ- လုပ်ငန်း စံ
8. ထုပ်ပိုးခြင်း: 1 ကီလိုဂရမ် / အလူမီနီယမ်သတ္တုပါးအိတ်
9. Min.မှာယူမှုပမာဏ: 10g
10. ငွေပေးချေမှု- Moneygram၊ Western Union၊ T/T။
11. ပို့ဆောင်မှု- EMS၊ DHL၊ FedEx
Drostanolone Enanthate ချက်ပြုတ်နည်းများ
25 ဂရမ် Drostanolone enanthate (20 ml)
ဆန်းစစ်ချက် 98% မိနစ် ၉၈.၃၀%
အတိအကျလှည့် +20°~+30° +27.84°
အခြောက်ခံခြင်းတွင် ဆုံးရှုံးမှု 0.5% အများဆုံး 0.16%
အရည်ပျော်မှတ် 50~58°C 53~56.5°C
နိဂုံး သတ်မှတ်ချက်သည် လုပ်ငန်းစံနှုန်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။
Drostanolone enanthate သည် drostanolone ၏ ester တစ်ခုဖြစ်သည်။Drostanolone ကို ပေါင်းစပ် ဟော်မုန်း ကုထုံးဖြင့် သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီးများတွင် ထပ်တလဲလဲ ရင်သားကင်ဆာ ရှိသော အမျိုးသမီးများ တွင် ညွှန်ပြသည်။Drostanolone သည် နိုက်ထရိုဂျင်၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့် ဖော့စဖရပ်တို့ကို ထိန်းထားနိုင်စေသည်၊ပရိုတိန်း anabolism တိုးပွါး;အမိုင်နိုအက်ဆစ် catabolism လျော့နည်းစေသည်။
drostanolone ၏ antitumor လုပ်ဆောင်ချက်သည် prolactin receptors သို့မဟုတ် estrogen receptors သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်မှုကို လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် အပြိုင်အဆိုင် ဟန့်တားခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။
Drostanolone enanthate 200 USP ထိုးဆေးသည် dihydrotestosterone ၏အလားတူလက္ခဏာများပါရှိသောအစွမ်းထက်သော androgenic steroid ဖြစ်သော drostanolone enanthate ကိုပေးသည်။Drostanolone သည် aromization ကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည် estrogen အဖြစ်သို့မပြောင်းလဲပါ။drostanolone ၏ anabolic နှင့် androgenic လုပ်ဆောင်ချက် နှစ်ခုလုံးသည် methyl testosterone ထက် များစွာ ကြီးမားပါသည်။17-beta-hydroxyl အုပ်စု၏ esterification သည် drostanolone ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကြာချိန်ကို တိုးစေသည်။ကြွက်သားဖြင့်ထိုးသွင်းထားသောအဆီတွင် Drostanolone esters များကို lipid အဆင့်မှနှေးကွေးစွာစုပ်ယူသောကြောင့် Drostanolone enanthate 200 ကို 1-2 ပတ်တိုင်းကြားကာလတွင်စီမံနိုင်သည်။
Drostanolone enanthate 200 တွင် ဆေးထိုးရန်အတွက် 10ml ဖြေရှင်းချက် (200mg drostanolone enanthate /ml) တွင် drostanolone enanthate ပါရှိသည်။
Drostanolone enanthate 200 သည် ကြွက်သားထိုးဆေးအတွက် အဝါရောင်အဆီပြန်သည့်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။
Materon Enanthate သည် 200 မီလီဂရမ် ဖော်မြူလာဖြစ်ပြီး အဆီအခြေခံသည့် အမြန်သရုပ်ဆောင်စတီရွိုက် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ဤထုတ်ကုန်တွင် Dihydrotestosterone တိုက်ရိုက်ဆင်းသက်လာသော Drostanolone Enanthate ပါရှိသည်။ထုတ်ကုန်သည် အလွန်ပြင်းထန်သော androgenic အကျိုးသက်ရောက်မှု အလယ်အလတ် anabolic အာနိသင်ကို ထုတ်လုပ်သည်။ဆိုလိုတာက ကြွက်သားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ မာကျောမှုနဲ့ သိပ်သည်းဆကို တိုးမြင့်စေပြီး အားကစားသမားတစ်ဦးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် အဆင့်မြှင့်တင်မှုတွေကို မြင်တွေ့နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ကုန်သည် ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက် အပြုသဘောဆောင်သော နိုက်ထရိုဂျင်ဟန်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်မှုကို အားကောင်းစေပါသည်။ရေကိုထိန်းထားနိုင်သည့်အခွင့်အရေးမှန်သမျှကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပြီး ဤဆေးသည် အလွန်အစွမ်းထက်ပြီး ကြာရှည်သောအကျိုးကျေးဇူးများဖြင့် သွေးထဲမှ လျင်မြန်စွာရှင်းလင်းပါသည်။ ဤထုတ်ကုန်အတွက်ဆေးများကို တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ် စီမံသင့်ပြီး အမျိုးသားများအတွက် အကြံပြုထားသောပမာဏမှာ 400 မှ 600 မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် တစ်ပတ်လျှင် 50 မှ 150 mg ခန့် သောက်သင့်သည်။
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများ။ အရည်အသွေးမြင့်တယ်ဆိုတာ စျေးကြီးတာကို မဆိုလိုပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောထုတ်ကုန်များသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းကြောင့် Europe နှင့် USA တွင်ထုတ်လုပ်သော Genotropin သို့မဟုတ် Humatrope ထက်များစွာစျေးသက်သာပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အများစုသည် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူများဖြစ်ပြီး Genotropin 100 IU အတွက် 500-800$ သုံးစွဲရန်မလိုအပ်ဘဲ၊ သင်သည် တန်းတူအရည်အသွေး 2-3 ဆ စျေးသက်သာမည်ဖြစ်သည်။
သိုလှောင်မှုအခြေအနေများ။ liophilisation နည်းပညာ (အအေးခံပြီး အခြောက်ခံခြင်း) နှင့် ဖန်ပုလင်းများကို ဖုန်စုပ်ထုပ်ပိုးထားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို ကုန်ပစ္စည်းပျက်စီးမှုမရှိဘဲ ရေခဲသေတ္တာအပြင်ဘက်တွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။
GMP လက်မှတ်။ GMP သည် အယုံကြည်ရဆုံး ဆေးဝါးလက်မှတ်စနစ်ဖြစ်သည်။
နေ့ချင်းပြန်။ သင်သိသည့်အတိုင်း ဤထုတ်ကုန်များသည် ပျက်စီးလွယ်သော ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အမြန်ပို့ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်ချိန် ၃-၇ ရက်အတွင်း သင့်အိမ်တံခါးကို တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ရန် အမျိုးမျိုးသော အမြန်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်။
10+ အစုံလိုက် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ပစ္စည်း 10 ခုနှင့် ထို့ထက်ပို၍ မှာယူပါက သင့်မှာယူမှုကို အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
အလွန်သတိရှိသောထုပ်ပိုးမှု။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်သတိရှိစွာ ထုပ်ပိုးထားပြီး အတွင်းတွင် ဆေးဝါးဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ထို့ကြောင့်၊ ယခုအချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ZERO သိမ်းယူမှု နီးပါး ရှိနေပါသည်။
အဖမ်းအဆီးအတွက် အခမဲ့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် အလွန်အောင်မြင်သော ပို့ဆောင်မှုနှုန်းမှာ - US နှင့် UK သို့ 100% နှင့် Europe သို့ 98% ဖြစ်သော်လည်း၊ အကောက်ခွန်မှ သိမ်းဆည်းရမိပါက သင့်ပက်ကေ့ခ်ျကို အခမဲ့ ပြန်လည်ပေးပို့ပါမည်။
အစုလိုက်လျှော့စျေးနှင့် ပြန်လည်ရောင်းချသူများအတွက် အထူးသတ်မှတ်ချက်များ။ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် အစုလိုက်ဝယ်ယူလိုပါက၊ သင့်အား အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှော့စျေးများပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ ကျေးဇူးပြု၍အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် Doris ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အခမဲ့ ညှိနှိုင်းပေးသည်။ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဖြစ်နေသည်ဖြစ်စေ မရသေးသည်ဖြစ်စေ အကြံဉာဏ်တောင်းခံနိုင်ပြီး ထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြည့်စုံသောအကြံဉာဏ်များကို ရယူနိုင်ပါသည်။
အထူးကောင်းမွန်သော ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်- သင်သည် နံနက် ၈ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီ (တရုတ်စံတော်ချိန်) မှ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး ဤကာလအတွင်း အီးမေးလ်တိုင်းကို ပျမ်းမျှ မိနစ် 20 အတွင်း ဖြေကြားနိုင်သည်။၎င်းကိုယခုချက်ချင်းစစ်ဆေးပါ - သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
ယခင်- Drostanolone Propionate Powder Anabolic Masteron Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင်မှုအတွက် Masteron P CasNO.521-12-0
နောက်တစ်ခု: Drostanolone Enanthate CAS 472-61-145 အစုလိုက် စက်ဘီးစီးခြင်း Drolban Masteron Steroid Powder